Onye nlekọta nke mkpụrụ osisi "Ovary universal", ntụziaka maka ojiji - Fatịlaịza - 2019
Ajụjụ banyere otu esi eme ka mkpụrụ nke ubi na-eto eto nọgidere na-aba uru na oge a. Ọ dị mkpa karịsịa maka ndị nọ n'oge okpomọkụ bụ ndị na-enweghị ike ịnya isi maka ọmụmụ nke ala na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke pollinators. Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-ekwu okwu banyere ọgwụ ọjọọ nke nwere ike ịme ka e guzobe ovary ahụ ma mụbaa mkpụrụ, ya bụ "Ovary uwa" na ntuziaka maka ojiji ya.
Usoro nke ime ọgwụ
Aro maka iji ọgwụ "Universal Ovary" mee ihe maka ubi a kụrụ n'ubi
Uru nke fatịlaịza "Ovary"
Nlekọta na enyemaka mbụ maka nsị
Ọnọdụ nchekwa ọnọdụ ọgwụ ọjọọ
"Ovary universal" dị ka fatịlaịza
Dị ka aha ahụ pụtara, ọgwụ "Universal Ovary" na-ezo aka na nri ndị na-akpali ọdịdị nke ovaries na ọtụtụ akwukwo nri na mkpụrụ osisi na-esonyere na mmụba ha mkpụrụ ọtụtụ ugboro. Ọ bụ ihe na-akpali akpali ma na-agụnye ihe ndị na-eto eto, micro-na macroelements, nke na-eme ka ihe oriri na-edozi ma na-akwalite mkpụrụ osisi. Nri nke na-eto eto (phytohormones, phenol, urea) na-ahazi uto osisi. Ihe mgbochi na-arụ ọrụ nke nkwadebe ahụ bụ ajụjụ gibberellic na soda salts. Gibberellins bụ organic acids nke na-emetụta uto ngwa ngwa.
Ị ma? A na-atụkwa ọgwụ ndị dị na Gibberellinovye n'usoro ịkwadebe mkpụrụ maka ịgha mkpụrụ. Ọ bụghị nanị na ha na-eme ka ụbụrụ ha dị elu, kamakwa ọ na-eme ka usoro germination ha dị elu maka ihe dị ka otu izu.
Ntughari a bu nkwadebe nke uwa nile nke kwesiri maka nhazi otutu ihe ubi akwukwo nri, osisi osisi na osisi:
raspberries, currants, strawberries;
pears, cherị, apụl.
Na-ere n'ụdị uzuzu, gbakwunyere na 2 g na 10 g. Ndụ ndụ nke ọgwụ ahụ bụ afọ abụọ.
Ngwunye a kọwara na-agụnye bekee ndị na-ahụ maka ịhazi uto na mkpụrụ osisi.
Inwe ihe ubi, fatịlaịza nwere mmetụta dị na ha:
meziwanye ihe oriri na osisi;
akwalite nhazi ovary;
egbochi nkwụsị nke ovary;
enwekwu mkpụrụ dị elu ruo 30%;
eme ka mkpụrụ osisi ahụ dị ngwa ngwa;
na-ebelata ihe ize ndụ nke mmebi osisi site na ọrịa ndị na-akpata ọrịa (mbubreyo blight, septoriosis, macrosporosis);
eme ka iguzogide ọnọdụ ihu igwe ọjọọ.
Fatịlaịza site n'enyemaka nke mmiri mmiri nke na-ekpuchi ntụ ntụ ahụ bụ akwụkwọ na ịkụ nke osisi ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị, mmepụta ozugbo nke nkwadebe amalite.
A na-emepụta ihe ubi n'ubi site na ịpịkọta. A na-eme ka ntụ na-ekpuchi tupu a rụọ ọrụ na mmiri ma kpalie ya nke ọma. A na-atụ aro ka a na-arụ ọrụ na "Ovary" ka e mee ya n'ụtụtụ (mgbe igirigi kwụsịrị ma tupu 9 elekere) ma ọ bụ n'ehihie (mgbe elekere 6 nke ụtụtụ). Nakwa ịrụ ọrụ ọ kachasị mma ịhọrọ ụbọchị na-adịghị agwụ agwụ, ụbọchị na-enweghị isi.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe, ọ dị ezigbo mkpa idebe ụkpụrụ na nhazi nke fatịlaịza na-enye ntụziaka. Ọ bụrụ na ọ dị oke, mmetụta ahụ ga-abụ nke na-abụghị: nsị nke osisi na nhazi nke ovary ahụ ga-ebelata.
N'agbanyeghi na fatịlaịza "Ovary" bu nkwadebe nke uwa nile, oge ngbacha ahihia na otu esi esi kpoo ihe na-akpali nkpuru osisi "Ovary universal" maka ihe ubi di iche iche di iche. Dịka ọmụmaatụ, "ovary bụ eluigwe na ala" maka tomato dịka ntụziaka ndị ahụ, gbara alụkwaghịm n'ụdị ndị a: 2 g ntụ ntụ kwa 1 liter mmiri. Na 10 m² nke ala ga-achọ 0, 3 lita mmiri. A na-edozi nhazi ugboro atọ: na mmalite nke okooko osisi, mgbe ahụ, n'oge e guzobere brushes nke abụọ na nke atọ. Maka kachasị arụmọrụ, ntanye atọ zuru ezu. Maka eggplants na ose dị ụtọ, ihe ndị dị na ya bụ otu ihe, ma a na-emegharị ya ugboro ugboro ná mmalite nke okooko na otu oge na mbido budding. A kwadoro "Ovary" maka cucumbers na oke nke 2 g kwa 1, 4 l nke mmiri, na ọnụ ọgụgụ nke ịrụ ọrụ oriri bụ 0,5 l kwa 10 m². Osisi a na-agbanye okpukpu abụọ: mgbe ha na-amalite na oge ntoju na oge nke nnukwu okooko osisi. Norm for beans: 1, 4 lita mmiri kwa 2 g ntụ ntụ, na ọnụego 0,3 lita kwa 10 m². A na-eme ihe na-eme ka ọ dị na mmalite nke okooko na n'oge e guzobere buds. Iwu maka nhazi agwa na-etinyekwa na kabeeji. N'ihi na a na-atụgharị poteto, 2 g nke "Ovary" na diluted na 2 lita mmiri, na 10 m². 0, 3 lita nke ngwọta ga-achọrọ. Maka peas, a na-eme ka ntụ ntụ sie ike na 3.3 lita mmiri. Nhazi na-ewere ọnọdụ n'oge mmalite nke okooko na oge nke abụọ - n'oge e guzobere buds.
A na-emeso mkpụrụ vaịn otu ugboro na njedebe nke okooko osisi na ngwọta nke 2 g ntụ ntụ na 1 l nke mmiri. Maka 10 m² ị chọrọ 1, 5 lita nke ngwakọta. Maka currants na raspberries, a na-atụgharị akpa ahụ n'ime mmiri mmiri, a na-atụgharịkwa ya mgbe e guzobere buds na nwata ovaries. N'ihi nhazi strawberries, pears, cherị, plums, apple osisi mkpọ diluted ke 1 liter mmiri. N'ihi na pears na strawberries, ị ga-mkpa 0, 4 lita kwa 10 m², na cherị, plums, apụl - 0, 6 lita kwa 10 m². A na-emeso Strawberries na mmalite nke okooko na ugboro ọzọ n'izu, osisi - na oge nke nnukwu okooko na ọzọ - mgbe epupụta daa.
Ị ma? Ọgwụ "Universal Ovary" na-enye aka n'ịmepụta nnukwu, mkpụrụ osisi na tomato dị ụtọ, na-emekwa ka mmụba nke vitamin C. na-
Ogo ovary nke uwa nile nwere otutu uru ma e jiri ya tụnyere ihe ndi ozo na ihe ndi ozo, n'ihi ya:
mee ngwa ngwa wee malite ime ya;
adịghị emerụ ndị mmadụ, ụmụ ahụhụ, ụmụ anụmanụ;
na-akwalite ịzụlite inflorescences na-emepụta nri;
egbochi ọdịda nke ovary;
na-eme ka oge mkpụrụ osisi ahụ dị mkpirikpi n'izu;
na-eme ka ọnụ ọgụgụ na-arị elu site na pasent 30;
na-amalite iguzogide ọrịa ndị na-akpata ọrịa, pests, na ọnọdụ ọjọọ ihu igwe na osisi;
accelerates mkpụrụ germination na seedling ibu.
Nke a fatịlaịza bụ nke atọ nke ihe ize ndụ. N'ezie, dị ka ọ bụla ọgwụ ọjọọ, ọ dị mkpa ịgbaso usoro nchebe ụfọdụ mgbe ị na-arụ ọrụ na Ovary, ma ọ dị mma maka ụmụ mmadụ, anụ na aṅụ karịa nkwadebe ọgwụ. Fatịlaịza adịghị ekpofu ahịhịa ndụ na-adịghị emebi mkpụrụ ha. Mgbe ị na-eji fatịlaịza, ị ga-enwe ike iwe ihe ubi mbụ karịa ka ọ dị na mbụ, nke ga-eweta uru dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eto mkpụrụ maka ire ere. Tụkwasị na nke ahụ, mkpụrụ osisi a ga-egbute ga-ebu ibu ma na-atọ ụtọ, nke ga-eme ka ihe ọkụkụ na-asọmpi. Ke adianade do, fatịlaịza na-eme ka e nwee ovaries n'osisi ndị toro eto na ala ndị na-emepụta nri na n'ọnọdụ nke obere ndị pollinators.
Dịka ntụziaka ndị ahụ si dị, ọgwụ "Ovary" bụ onye na-akpali mkpụrụ ndụ nke mkpụrụ osisi ma bụrụ nke atọ nke ihe ize ndụ. Nke a pụtara na ọ gaghị ewetara ụmụ mmadụ nsogbu dị ukwuu, ma iji fatịlaịza achọ ntinye aka na iwu nchekwa (karịsịa maka ndị mmadụ nwere mmeghachi omume na-adịghị mma). Tupu ị rụọ ọrụ na ntụ ntụ, ị ga-eyi uwe globa, kpuchie akụkụ niile nke ahụ na uwe, zoo ntutu isi na isi. Chebe anya gị na anya na ọnụ gị na imi na respirator ma ọ bụ gauze bandeeji. N'ọnọdụ ọ bụla dịka akpa maka ịme ọgwụ ọjọọ, anaghị eji nri nri.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-efesa ya, jide n'aka na ị ga-asacha aka gị nke ọma na ncha ma sachapụ ọnụ gị na mmiri. N'oge ọrụ, a machibidoro iri nri, ịṅụ ihe ọṅụṅụ, metụ anya.
Ọ bụrụ na ị na-akpọrọ akpụkpọ ahụ, ọ ga-asa ya na mmiri na ncha. Ọ bụrụ na ihe ngwọta ahụ na-enwu n'anya - gbanye ha mmiri ozugbo ma gaa na onye ọkà mmụta ọgwụ na ngwa ngwa o kwere mee. Ọ bụrụ na ị kpọtụrụ afo - ṅụọ otu iko mmiri dị na ya ma were ọkụ na-arụ ọrụ na ọnụego 1 mbadamba kwa 1 n'arọ nke arọ ahụ.
A ghaghị ịchekwa ọgwụ ahụ na ngwugwu a kara akara na ebe gbara ọchịchịrị, nke ọma, nke na-enweghị ike ịnweta ụmụaka, na okpomọkụ adịghị elu karịa + 25 Celsius. Ndụ ndụ adịghị karịa afọ 2, ọ bụrụhaala na emegheghị ọgwụ. A pụghị ịchekwa ngwọta a na-atụgharị anya karịa otu ụbọchị n'ime ụlọ dị jụụ. N'okwu a, a ga-etinyechi akpa ahụ. Ọganihu na-akpali akpali, ọ bụrụ na ị na-agbaso ntuziaka maka ịṅụ ọgwụ, ga-abụ onye inyeaka kachasị mma maka ịkọ ugbo na ịkọ ugbo. A ga-echebe osisi site na ọtụtụ ọrịa na pests, na n'oge na-adịghị anya, ị ga - abụ onye nwe nnukwu ihe ubi dị ụtọ.
Otu esi eji osisi nke osisi na-achọ mma
Ụdị okpomọkụ dị iche iche - aha mmalite Moscow
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Uru nke iji mkpụrụ osisi bud stimulator "Ovary"